किन केटाहरू ‘आन्टी टाइप’का महिलाहरू मन पराउँछन् ? – Ramailo Sandesh
नायिका श्वेता खड्काले केहि महिना पहिला निकै कान्छा युवकसँग बिवाह गरिन् । त्यस्तै अभिनेत्री प्रियंका कार्की नायक आयुष्मान देशराज जोशीबिच बिवाह भएसकेको छ ।यो पनि थाहा भएकै कुरा हो कि, प्रियंका भन्दा आयुशमान उमेरले कान्छो छन् । अब अर्की प्रियंका अर्थात बलिउड अभिनेत्री पि्रयंका चोपडाको कुरा गरौं ।
हामीकहाँ विवाहको कुरा गर्दा पुरुषभन्दा कम उमेरकी दुलही खोजिन्छ । यसको धार्मिक, समाजिक, मनोवैज्ञनिक पक्ष के छ ? त्यसतर्फ नलागौं। यद्यपी पुरुषले आफ्ना जोडीको रुपमा कम उमेरकै महिला खोज्ने गर्छन् । अधिकांश दम्पतीलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरुमा पतिको भन्दा पत्नीको उमेर कम पाइन्छ।